Torohevitra 4 + 1 hahandro amin'ny CBD | Nutri Diet
Torohevitra 4 + 1 amin'ny fandrahoana sakafo miaraka amin'ny CBD
NutriDiet | | fahasalamana
Nandeha lavitra ny tontolon'ny CBD tato anatin'ny taona vitsivitsy, ary taonina no hita toetra tsara ho an'ny vatan'olombelona tsy misy akora miteraka fiankinan-doha na aretina misintona. Androany dia te-hitondra toro-hevitra vitsivitsy aminao izahay momba ny fampiasana cannabidiol ao an-dakozia, fomba iray tena atolotra hankafizanao azy io ary hijerena ireo tombontsoa entiny.
1 Maninona no mahandro amin'ny CBD
2 Mahafantatra sakafo CBD
3 Safidio ny vokatra tsara indrindra
4 Ianaro ny fomba fanaovana dibera CBD
5 Bonus: mifalia!
Maninona no mahandro amin'ny CBD
El fampiasana CBD amin'ny sakafo amin'ny iray amin'ireo fomba tsotra indrindra handaniana azy io, ary ny fanampiana izany amin'ny lovia rehetra dia safidy tsara raisina ho famenony. Ny tombony azo avy amin'ny menaka CBD dia tsy tambo isaina, noho izany dia mamporisika anao izahay hampiditra azy io amin'ny sakafo mba tsy hanadino ny fatra isan'andro.
fikarohana fomba fahandro mahasalama miaraka amin'ny CBD toa an'ity iray ity, io no fomba tsara indrindra hanaronana ny tsiro mahery (izay mety ho matanjaka ho an'ny sasany) ary hikarakara ihany koa ny tsipikao sy ny toe-batanao sy ny toe-tsainao.
Mahafantatra sakafo CBD
Ny fandraisana cannabidiol amin'ny resipeo (fantatra amin'ny hoe CBD edibles) dia tsy mitovy amin'ny fandraisana azy io amin'ny fomba tsindrona ary hisy fiantraikany miadana kokoa aminao. Noho izany, mamporisika anao izahay hianatra izay rehetra azonao atao momba ireo Sakafo CBD ary, indrindra, ohatrinona no alainao isaky ny lovia tsirairay.
Ohatra, ny latsaka roa ao anaty kafe dia tsy tokony ho olana hahatratra ny fatra isan'andro. Na izany aza, amin'ny edibles mahaliana kokoa (toy ny CBD brownies) dia tokony hampiasa calculera ianao hahafantaranao hoe ohatrinona no azonao raisina mba tsy hisy fiantraikany ratsy aminao izany.
Safidio ny vokatra tsara indrindra
Na mividy edibles CBD na miantsena ianao mividy menaka cannabidiol raha hanao ny fomba fahandro anao manokana, aza atao ambanin-javatra ny kalitao. Betsaka ny orinasa manao vokatra mitovy amin'izany, koa mitady marika tsara foana, ny fampahalalana azo atao rehetra ary andramo izay mahatsapa anao indrindra.
Hahita fomba fahandro vitsivitsy amin'ny menaka CBD ianao ary ny hafa izay mitoka-monina amin'ny CBD, amin'ny vovoka. Ity farany dia matanjaka kokoa ary mila mitandrina ianao amin'ny vola ampidirinao mba tsy hihoatra ny fatra isan'andro. Amboary ireo fomba fahandro mba hifanaraka aminao sy amin'ny vatanao.
Ianaro ny fomba fanaovana dibera CBD
Azo antoka fa nahita fomba fahandro be dia be izay ho hitanao ianao mora tokoa ny manampy ny CBD amin'ny resipeo rehetra, fa misy fomba hafa koa handaniana azy io. Amin'ny fomba mora dia afaka manamboatra dibera CBD ianao, izay hanompo anao mahandro sakafo masira, ranom-boankazo betsaka, ary ambonin'izany rehetra izany, mofomamy mahafinaritra.
Na dia maharitra ora maromaro aza, ny fomba dia tsotra toy ny manampy dibera roa tsy misy masira sy rano efatra kaopy amin'ny vilany, miaraka amin'ny habetsaky ny volanao mampiasa menaka CBD. Mahandro amin'ny hafanana ambany mandritra ny 3 na 4 ora ary kobanina isaky ny antsasak'adiny. Rehefa matevina sy mamirapiratra izy dia azonao atao ny mametraka azy ao anaty vata fampangatsiahana mandritra ny adiny roa hanamafisana. Fifaliana!
Aza ferana ny tenanao rehefa mamorona sy mahandro (tsy amin'ny CBD ihany fa isaky ny tafiditra ao an-dakozia ianao). Fanandramana amin'ny doka kely amin'ny fomba fahandro samihafa mba hitsapana izay tianao indrindra sy izay mifanaraka aminao indrindra. Hahita zavatra mahatalanjona ho anao ianao!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » fahasalamana » Torohevitra 4 + 1 amin'ny fandrahoana sakafo miaraka amin'ny CBD
Hevitra kely fisakafoanana mba hankafizanao ity fahavaratra ity
Lazainay aminao ny atao hoe edamame, ny fananany ary ny fomba fandraisana azy